Izinhlobo zokuqeqeshwa ngesisindo sakho | Amadoda aSitayela
Izinhlobo zokuqeqeshwa ngesisindo sakho
Amadoda aSitayela | | Kufanelekile, Ukufaneleka
La calisthenics, obeye aziwe njengo isisindo somzimba, uhlobo lwe ukuqeqeshwa okusebenzisa isisindo sakho ukuqinisa imisipha ngenxa yokumelana komzimba namandla adonsela phansi. Lokhu kusho ukuthi akusadingeki ukuya ejimini noma ukusebenzisa imishini ukuze ibe sesimweni; Ungenza lo msebenzi ekhaya futhi uthole izinzuzo ezifanayo njengokungathi uye ejimini. Ilungele labo abasanda kuqala ukuqeqeshwa, ama-calisthenics ayabasiza ukuthi bazi isimo sabo somzimba nemikhawulo yokuthuthuka njengoba izivivinyo zenziwa. Yiziphi izinhlobo zokuqeqeshwa ezinconywayo ukuqeqeshwa ngale ndlela?
1 Izinhlobo zokuqeqesha
2 Izinzuzo zeCalisthenics
Umzimba ingasebenza amaqembu amaningi emisipha Ngezinhlobo ezahlukahlukene zokuqeqeshwa kanye nokuhlukahluka ngeke kugcine kuphela intshisekelo yakho ekuzivocavoca umzimba, kepha futhi kuyonikela esimisweni esiphelele ngokwengeziwe. Ngakho-ke, uzokwazi ukulinganiselwa kwakho futhi uzosebenzela ukukuhlula ngokuthuthuka ekuqeqeshweni kwakho.
Okubuswa zisebenza umgogodla, izicubu zangemuva nezingalo. Ngokuyinhloko, badinga ukuthi umzimba uphakanyiswe ngokusebenzisa ibha nezingalo uqobo. Lolu hlobo lokuzivocavoca lungenye yezinto ezinzima kakhulu ukuluqonda, ngakho-ke kunconywa ukuthi uqale ngokuhudula oku-ome njengeqanda okukuvumela ukuthi uthuthukise inqubo bese wengeza ubunzima. Ngaphezu kwalokho, ukudonsa kungahlanganiswa neminye imikhuba esebenza emuva kwakho futhi inikeze ukuhlukahluka okuningi ekuqeqeshweni kwakho. Ezinye ze ezinye izindlela ezihamba phambili kuma-chin-ups yibo ima eceleni dumbbell futhi umugqa isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo.
En izigaxa basebenza izinqa, isisu nemilenze. Njengama-chin-ups, kubalulekile ukuqonda kahle inqubo ukuthola zonke izinzuzo zayo; Izikwele zithuthukisa ukuguquguquka komzimba futhi zisize ukuvimbela ubuhlungu beqolo. Ukugcina ukuma okuhle nokubeka isisindo sakho ezithendeni zakho kuyisihluthulelo sokwazi lo msebenzi. Lapho le ndlela isenziwe kahle, ungaqhubekela ezinhlotsheni eziyinkimbinkimbi kakhulu, njengeBulgaria.
Ukujima sebenza izingalo zakho nomzimba wakho ophezulu. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi, ukuze ukwenze kahle, umzimba kufanele uqondaniswe futhi kufanele uqinise isisu. Lapho usukwazile ukucindezelwa okuyisisekelo, ungabandisa ubunzima babo ngokubeka izandla zakho ezindaweni ezahlukahlukene, futhi wenze nezandla ezenziwa ngesandla esisodwa.
Ukuhlolwa kukaBurpee isebenza wonke umzimba futhi ithuthukise ukukhuthazela kwemisipha ngoba iqoqa izinhlobo eziningana zokuzivocavoca. Njengoba kungukuzivocavoca okuhlanganisa ama-squats, ama-push-up nokweqa okuqonde mpo, kuyanconywa ukuthi uqale ubheke lawa masu ngaphambi kokuzama ukukwenza, uguqule ukuqina kwesimo sakho somzimba.
Ukuthola zonke izinzuzo ze-calisthenics, kubalulekile ukugcina ukuma komzimba okuhle futhi uguqule izindlela zokuzivocavoca umzimba. Izinzuzo eziyinhloko zalolu hlobo lokuqeqeshwa yilezi ezilandelayo:
Vimbela ukulimala ngoba umzimba uyakwazi ukwenza izivivinyo ezahlukahlukene kakhulu, ngokungafani nokwenzeka ejimini, ezinamandla amakhulu.
Ikhuthaza ukuguquguquka okubandakanya, phakathi kwezinye izinto, ukuvumela ukuvivinya umzimba okuya ngokuya kuba nzima.
Siza lawula umzimba futhi unqobe ukulinganiselwa kwakho.
ICalisthenics ukuzivocavoca umzimba okusebenzisa isisindo sakho ukuzivocavoca umzimba. Ukudonsa, ama-squats, ama-push-up, kanye nokuhlolwa kweBurpee ezinye izinhlobo zokuzivocavoca ezikhuthaza ukuguquguquka, ukushisa ama-calories, nokuvimbela ukulimala. Lolu hlobo lokuqeqeshwa likuvumela ukuthi wazi umzimba wakho nemikhawulo yawo kepha, ngokuyisisekelo, nqoba izithiyo zakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Kufanelekile » Izinhlobo zokuqeqeshwa ngesisindo sakho
Ulungiselela kanjani umshado
Izishefi zomzimba ezihamba phambili zabesilisa